आस्था राउत काण्डः प्रहरी नागरिक प्रति अनुदार , ओलि सरकारलाई प्रहरी अलोकप्रिय बनाउर्दै | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १३ माघ २०७६, सोमबार २१:२० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । कास्की फुटबल संघका अध्यक्षलाई कुटेको आरोपमा प्रदेश सांसद दीपक मनाङ्गेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । अभद्र व्यवहारको आरोपमा उनी तीन दिन हिरासत बसेर ६ हजार धरौटीमा आइतबार छुटे ।
मनाङ्गे माला लगाएर हिरासतबाट निस्केको भोलिपल्ट गायिका आस्था राउतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई चार दिनका लागि हिरासतमा राखेको छ । उनलाई चारदिन हिरासतमा राख्न सीडीओ कार्यालयले अनुमति दिएको छ ।
मनाङ्गे र आस्था राउतको प्रकरण तुलनायोग्य हुन् वा होइनन्, प्रहरी नै जानोस । तर, हातपातको घटनामा भन्दा भाँति नपुर्‍ई बोलेको घटनामा प्रहरी बढी कठोर देखिएको छ ।
आस्थामाथिको कारवाहीलाई सामाजिक सञ्जालमा धेरैले ‘झिंगालाई तोप हानेको’ संज्ञा दिएका छन् । हुन पनि प्रहरीले आवश्यकताभन्दा ठूलो एक्सन लिएको छ ।
दीपक मनाङ्गे प्रदेश सभामा सत्तारुढ दलका सांसद हुन् भने आस्था एक कलाकार । मनाङ्गे गुण्डा पृष्ठभूमिका हुन् भने आस्था अहिलेसम्म कुनै अपराध त के विवादमा पनि मुछिएकी थिइनन् ।
प्रहरीले हरेक अभियुक्तमाथि कारवाही अघि बढाउँदा उसको पृष्ठभूमि पनि हेर्ने गर्छ । पहिलोपटक गल्ती गर्नेलाई भन्दा गल्ती दोहोर्‍याउनेमाथि प्रहरी कठोर हुन्छ । यहाँ उल्टो देखिएको छ ।
आस्थामाथि कारवाही नै हुनुहुँदैन भनेर कसैले भनेको थिएन । तर, उनले आफूले गरेको गल्ती सच्याउने भरपुर प्रयास गरेकी थिइन् । सुरमा उनले आफ्नो विवादित भिडियो फेसबुकबाट हटाइन् । त्यसपछि बारम्बार आफ्नो गल्तीप्रति माफी मागिन् । अनि, सिक्किमबाट नेपाल आउनासाथ आफैं प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भइन् । अर्थात् उनले आफ्नो गल्ती महसुस गरेर प्रहरीमा ‘आत्मसमर्पण’ नै गरिन् । तर, प्रहरीले आफ्नो अनुदार चरित्र देखायो ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा चेकजाँचमा खटिएकी प्रहरीसँग आस्थाले विवाद गरेकी थिइन् । त्यहाँ उनी गलत देखिएकी थिइन् । तथापि प्रहरी कर्मचारीको व्यवहार पनि उत्तिकै खस्रो थियो । त्यसपछि भिडियो लाइभमा आएर प्रहरीमाथि गाली वर्षाउनु आस्थाको अर्को गल्ती थियो । त्यसबेला सामाजिक सञ्जालमा उनले ठूलो आलोचना पनि खेप्नुपर्‍यो । प्रहरी कर्मचारीप्रति सहानुभूति देखियो ।
तर, अहिले माहोल उल्टिएको छ । आस्थाप्रति सहानूभूति र प्रहरीप्रति आक्रोश पैदा भएको छ । एक हिसाबले प्रहरीलाई ‘ब्याकफायर’ भएको मान्न सकिन्छ ।
कतिपयले कानूनको शासनमा सबै बराबर हुने भएकाले राउतलाई थुनामा राख्नु ठीक भएको तर्क पनि गरेका छन् । जस्तो कि– ट्विटरमा वीर महरा लेख्छन्, ‘गल्ती गरेपछि मलाई माफ गरिदिनुस्भन्दा माफी पायो भने न्यायसँग अन्याय हुन्छ, किनकि आस्था राउतले छाडा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ …..’
तर, धेरैले चाहिँ गल्ती स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा चार–चार दिन थुनामा राख्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरेका छन् । जस्तो कि– देवेन्द्र बर्गौताले नेपाल प्रहरीलाई मेन्सन गर्दै ट्वीट गरेका छन्, ‘आस्था राउतलाई चेतावनी र सुझाव दिनु मनासिव थियो । तर, हिरासतमै राखी अनुसन्धान गर्नु भनेको जनताप्रति प्रहरी गुण्डागर्दीको नमूना नै हो ।’
यस्तै बहस राउत र प्रहरीबीच विमानस्थलमा भएको विवाद बाहिर आएका बेला पनि भएको थियो । तर, त्यसबेला प्रायः सबैको मत थियो कि प्रहरीसँग भएको विवादलाई लिएर गायिका राउतले फेसबुक लाइभमा गालीगलौज गर्नु सर्वथा गलत छ ।
त्यसबेलाको माहोल आफ्नो पक्षमा रहेको देखेर उत्साहित बनेको प्रहरीले आस्थाप्रति कडा रबैया अपनायो । विमानस्थलमा उनी र महिला प्रहरीबीच विवाद भएको सीसीटीभी फुटेज प्रहरीले ‘लिक’ गर्‍यो र राउतलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दामा पक्राउ गर्न अनुमति लियो । ‘गायिका राउत फरार’ भन्ने सन्देश दिन खोज्यो । जबकि उनी सिक्किमको एक कार्यक्रममा जाने क्रममा विवाद भएको थियो र फर्किएर प्रहरीको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएकी थिइन् ।
सिक्किमबाट फर्किएपछि राउतले आफ्नो बचन पूरा गरिन् र सोमबार बिहानै आफन्तसहित महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय लैजाने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै आस्थाले कानूनअनुसार जे हुन्छ, त्यो स्वीकार गर्ने बताइन् ।
तर, प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उनलाई ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न समय माग्यो । प्रजिअ जनकराज दाहालले चार दिन हिरासतमा राख्न समय दिए ।
सिडिओ भन्छन्– पत्रकारलाई बताइरहन आवश्यक छैन
संघीय व्यवस्थामा पनि अर्धन्यायिक अधिकार उपयोग गरिरहेका काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाललाई हामीले सोध्यौं– के आस्थालाई चार दिन म्याद थप आवश्यक थियो ? उनले उत्तर दिए, ‘यो अनुसन्धानको कुरा हो, पत्रकारलाई बताइरहनु आवश्यक छैन ।’
एउटा व्यक्तिमाथि सिंगो प्रहरी/प्रशासन प्रतिशोध साँध्ने किसिमले प्रस्तुत भइरहेको धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । तर, प्रजिअ दाहाल यो विषयमा मिडियालाई प्रष्ट पारिरहनु आवश्यक ठान्दैनन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल भन्छन्, ‘आस्था राउतलाई मुद्दा नै चलाउनु हुँदैन भन्ने होइन । फौजदारी संहिताअनुसार, तर थुनामा नराखी पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । हाजिरी जमानी वा दैनिक तारेखमा राख्न सकिन्थ्यो । तर, यो मुद्दामा प्रहरी सुरुदेखि नै व्यक्तिको पछि राज्य लागेको हो कि भन्ने ढंगबाट प्रस्तुत भएको छ । यस्तो हुनु राम्रो होइन ।’
माघ २२ र २३ गते लगातार दुइ दिन विदा
ललितपुर ।तामाङ समुदायले मनाउने सोनाम ल्होछारको अवसरका ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाले दुई दिन सार्वजानिक विदा दिने भएको छ ।
आफ्नै छोरीसँग विवाह गर्ने घिनलाग्दो कानुन पास
एजेन्सी । विश्वका रहेका देशहरुमा केही यस्ता कानुन बनेका छन् जुन सुन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ । आज…
सरकारको छुट्ने भयो पसिना, कांग्रेसद्वारा आन्दोलन घोषणा
काठमाडौं । बहुुमतका नाममा खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले अधिनायकवादी रवैया देखाएको भन्दै मुख्य बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद…
काठमाडाैं । नारायणहिटी दरबार पुगेका अवलोकनकर्तामा एउटा जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ, “राजपरिवारका सदस्य सिनेमाप्रति चासो राख्थे कि राख्दैनथे ?…
‘नेकपा’मा त्रिपाठीको स्वतन्त्र समूह मिसिने
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नेता हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको स्वतन्त्र समूहलाई पार्टी प्रवेश गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको…
सुनचाँदी व्यवसायी संघद्वारा मकवानपुर प्रहरीलाई हेल्मेट तथा साईकल हस्तान्तरण
मकवानपुर सुनचाँदी व्यवसायी संघ हेटौँडा, मकवानपुरले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरलाई ६ वटा साईकल तथा हेल्मेट हस्तान्तरण गरेको छ ।
ससुरा बा ! (कथा) 14 views
यस्तो छ , सेक्स गर्दा छोरा वा छोरी हुने साइत7views
ऐतिहासिक लमजुङ दरबार अपहेलित6views
पौराणिक कथा : बाहुन, ठग तथा बोका6views
वाइडवडी जहाजले आजदेखि नियमित उडान भर्दै6views
यस कारण गरिन् नीलम शाहले रामकृष्ण ढकालसँग ‘डिभोर्स’5views